स्कुल-अफिस सबैतिर महिलालाई सम्मान गर्नुहोस्, यी संस्कारहरू शुरुदेखि नै बच्चाहरूलाई दिनुहोस् « Janaboli
स्कुल-अफिस सबैतिर महिलालाई सम्मान गर्नुहोस्, यी संस्कारहरू शुरुदेखि नै बच्चाहरूलाई दिनुहोस्
इन्द्र आचार्य । हामी सबैको हाम्री आमा र दिदि–बहिनीहरूसँग गहिरो प्रेम छ। हामी उनीहरूको लागि हर प्रकारको त्याग गर्न सधैँ तयार छौं। तर के अरु कसैका आमा, छोरी चेलीप्रति पनि त्यस्तै भावना छ त ? यो प्रश्न गर्ने अधिकार छ । किनकी समाजमा अहिले जे घटना भइरहेका छन् यी घटनाले नितान्त त्यस्तो गर्न सकेका छन् भन्ने देखिन्न ।
नवरात्री भरी सम्पूर्ण देश पूर्ण समर्पणका साथ शक्तिका देवी दुर्गाका विभिन्न रूपहरूको पूजा गर्नमा डुबेको छ। यो सही समय हो जुन हामी बीचमा रहेको महिला शक्तिलाई सम्मान गर्ने वाचा लिन्छौ । यसैले केही लेख्दैछौ । हामी महिलालाई उनीहरूको शक्ति महसुस गराउन घरदेखि शैक्षिक संस्था र कार्यस्थलहरूमा आफ्ना प्रयासहरू जारी राख्न प्रोत्साहन दिन सक्नेछौं। बच्चाहरूलाई शुरूबाटै महिला शक्तिलाई आदर गर्ने संस्कार सिकाउन सक्छौ । हामी यही नगर्नाले आज कलंकीत समाजको परिचय दिइरहेका छौ ।
आखिर कसैका आमा, कसैका दिदिबहिनी, कसैका छोरी चेलीहरु किन अझै विद्यालय, कलेज, कार्यस्थल र सडकहरूमा अदृश्य असुरक्षा महसुस गर्छन् ? किन ती सबैको बीचमा भएता पनि मानिसहरू अनेकौ शिकार हुनुपुग्दछन् । के यो हाम्रो मान, हाम्रो पालनपोषण, वा मनोवैज्ञानिक हाम्रो असामान्यतामा कुनै कमीको सूचक नै न ? अहिले न सोचे कहिले सोच्ने ?
आखिर, हामी किन पर्याप्त सभ्य कहलाइए पनि उनीहरूलाई पूर्ण सुरक्षित वातावरण दिन असफल भइरहेका छौ ? के यसको लागि सरकारहरू वा प्रशासनलाई दोष दिन पर्याप्त छ वा हाम्रो सोचाइ कतै जिम्मेवार छ ? हामी सबैले यसको मूल्याङ्कन गर्नुपर्दछ । हाम्रो संस्कृति अनुसार छोरी चेलीलाई निडर वातावरण सिर्जना गर्नु आवश्यक छ । ताकि कोही पनि असुरक्षित महसुस नगरून् वा कसैले केही गलत गर्ने सोच्नपनि नसकोस्। छोरा, छोरी दुबैलाई यसरी दिनुहोस् बच्चादेखि नै ज्ञान ।
महिला बिना पुरुष र हाम्रो सम्पूर्ण समाज अपूर्ण छ। महिलाको सहयोग बिना, शक्ति स्वरूप एकल परिवार हो। जहाँसम्म पुरुष सोच कल्पनामा पुग्न सक्दैन । महिला उनको अगाडि शक्ति स्वरुपाको एक रुप हो । तपाईं आफैं महसुस गर्नुहुन्छ की महिला बिना यो सृष्टि असम्भव छ । बरु पुरुषको विकल्प खोज्न थालिएको छ । तर महिलाको कोखविना सृष्टि असम्भव निश्चित छ ।
यसैले तपाई कुनै पनि परिवारको सामाजिक–मनोवैज्ञानिक अध्ययन गर्नुहोस्। जहाँ महिलाहरूलाई उपेक्षित गरिन्छ । त्यसले कष्ट र नकारात्मकताको वातावरण फैलाउन लामो समय लिँदैन । महिलाको गहिरो अनुकम्पा, एक अर्कामा भावनात्मक लगावले सम्पूर्ण परिवारलाई जोडिएको हुन्छ । जे भए पनि बच्चा ठूलो भए पनि उनीहरू आफ्नी आमाको लागि बच्चा हुन्। यसैलेपनि यो संस्कार आमाले पहिले सिकाउनु पर्दछ ।
हाम्रो देश आज संसारको सबैभन्दा परिष्कृत प्रजातन्त्रको सबैभन्दा कान्छो देश हो। विश्वले हाम्रो देशको संस्कृति र मूल्यमान्यताको उदाहरण दिदै आएको छ। यस्तो अवस्थामा हाम्रो चुनौती यसलाई कायम राख्नुपर्ने बढी छ। बच्चाहरुलाई बाल्यकालदेखि नै महिलाको सम्मान गर्ने संस्कार दिइनु पर्दछ । उनीहरुलाई पुस्तक वा भिडियोको राइम दोहोर्याएर यो सबै सिकाउन सकिदैन। यसको लागि हामीले उनीहरूका अगाडि अनुकरणीय उदाहरणहरू प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ।
हाम्रा बच्चाहरूले आमा र दिदीबहिनी, पत्नीका साथसाथै परिवार, छिमेकीहरू, स्कूल कलेजहरू, कार्यस्थलहरूमा सबै महिलाहरूसँग जुन व्यवहार गर्दछन् समान तरीकाले उनीहरूले सिक्ने र व्यवहार गर्ने छन् । बाल्यकालमा बच्चाहरूलाई त्यस्ता संस्कारहरू सिकाएर, एउटा जग बसाल्न सकिन्छ । जसको आधारमा उनीहरूलाई सभ्य र आदर्श नागरिक बन्न मद्दत गर्न सकिन्छ । जुन कुनै पनि देशको नागरिकको लागि सबैभन्दा आवश्यक हो।
स्कूल र कलेजमा सन्देश
परिवार पछि, बच्चाले स्कूल र त्यसपछि कलेजमा ज्ञानको साथ सभ्य नागरिक बन्ने ज्ञान लिन्छन्। अध्ययनको साथसाथै उनीहरूलाई शिक्षा संस्कृतिमा सक्षम शिक्षकहरूले अनुष्ठान र अनुशासनको शिक्षा पनि दिइरहेका छन्। शिक्षकहरूको काम उनीहरूलाई पाठ्यक्रम पुस्तकहरू मात्र पढाउनु होईन ।
उनीहरूलाई अझ राम्रो मान्छे बनाउने दिशामा लैजानु पनि हो। यस सन्दर्भमा, त्यस्ता शिक्षकहरूलाई आजीवन सम्झना गरिन्छ, जसले आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई जीवनका उदाहरणहरू सिकाउँदछन्। यस अवस्थामा शिक्षकहरूको जिम्मेवारी र चुनौती अझ बढी छ । विशेष गरी बच्चाहरूलाई प्राथमिक शिक्षा प्रदान गर्ने शिक्षकहरूको ठूलो भूमिका छ ।
किनभने त्यस समयमा बच्चाहरूको कोमल र संवेदनशील दिमागले उनीहरूको दिमागमा राखिदिएको कुरा त्यसै बिर्सँदैन। त्यो समय जब तिनीहरू महिलाको सम्मानको बारेमा राम्रोसँग शिक्षा दिन सक्छन्। जब बच्चाहरू ठूलो हुन्छन् र कलेज वा विश्वविद्यालय जान्छन्, तिनीहरूको संस्कार त्यहाँ देख्न सकिन्छ। त्यसैले अब प्राथमिक शिक्षामा विशेष शिक्षा दिँऊ ।
वासुदेव पौडेल/हरि बास्तोला पोखरा । नेपालमा निरंकुशताविरुद्धमा लोकतन्त्र र मानवअधिकार पक्षमा विभिन्न कालखण्डमा अनेक किसिमका
मुलुकको समृद्धि र जनताको सुख हासिल गर्ने राष्ट्रिय आकाङ्क्षा सफल बनाउन प्रमको आह्वान
काठमाडौ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार आर्थिक विकास र सामाजिक न्यायसहितको परिपूर्ण लोकतन्त्रलाई जनस्तरसम्म
निर्वाचन शान्तिपूर्ण मात्रै होइन, जनमत प्रतिबिम्वित हुनुपर्छ : प्रधानमन्त्री ओली
काठमाडौ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लोकतन्त्रको मुुटुु भनेकै निर्वाचन भएकाले सुुदृढ निर्वाचन प्रणाली विनालोकतन्त्र
नेकपा सरकार नेपाली सेनालाई बनाउँदैछ यति शक्तिशाली
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नेपाली सेनालाई अत्यन्तै
त्रिविले स्नातक तहमा पास गर्न नसकेकाहरुका लागि मौका समेत दिएर परीक्षा फारम खुलायो
माध्यामिक तहको गणित विषयमा पहिले नै यस्तो खालको परिमार्जन
परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी त्रिविको अति जरुरी सूचना
Examination Schedule M One Year B. Ed. -2076
स्नातकोत्तर तह प्रथम वर्षको परीक्षा तालिका प्रकाशित [तालिकासहित]
भक्तपुरमा डेरा गरी बस्ने २० वर्षीया जुनु श्रेष्ठको कोठाबाट यस्तो अवस्थामा २ युवक पक्राउ
भक्तपुरमा एकाएक कसरी फैलियो कोरोना भाइरस आतंक
त्रिविले गर्यो नतिजा प्रकाशित [अनलाइन यसरी हेर्नुहोस्]
रोशनी प्रकरणमा निर्दोष साबित भए पुर्व सभामुख महरा, शाहीले फेरि यतिसम्म भनिन्